Ruka 11 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Batak (Karo) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
11 Zvino panguva yaakanga ari mune imwe nzvimbo achinyengetera, paakapedza, mumwe wevadzidzi vake akati kwaari: “Ishe, tidzidzisei kunyengetera,+ sokudzidzisawo kwakaita Johani vadzidzi vake.”+ 2 Iye akabva ati kwavari: “Pose pamunonyengetera,+ itii, ‘Baba, zita renyu ngaritsveneswe.+ Umambo hwenyu ngahuuye.+ 3 Tipeiwo zvokudya zvedu+ zvanhasi maererano nezvinodiwa zvezuva racho. 4 Tikanganwirei zvivi* zvedu,+ nokuti isu tinokanganwirawo munhu wose anotitadzira;+ uye musatipinza mumuedzo.’”+ 5 Uyezve, akati kwavari: “Ndiani wenyu angava neshamwari, anoenda kwairi pakati pousiku, oti kwairi, ‘Shamwari, ndikweretesewo zvingwa zvitatu, 6 nokuti shamwari yangu iri parwendo ichangobva kusvika uye handina chokuipa’? 7 Zvino achipindura, uya ari mukati anoti, ‘Rega kundinetsa.+ Suo ratokiyiwa, uye ini nevana vangu tatorara; handigoni kumuka ndikakupa chero chinhu chipi zvacho.’ 8 Ndinokuudzai kuti, Kunyange asingamuki akamupa chero chinhu chipi zvacho nokuti ishamwari yake, chokwadi nokuda kwokusimbirira kwake+ iye achamuka akamupa zvinhu zvaanoda. 9 Naizvozvo ndinoti kwamuri, Rambai muchikumbira,+ uye muchazvipiwa; rambai muchitsvaka,+ uye muchawana; rambai muchigogodza, uye muchazarurirwa. 10 Nokuti munhu wose anokumbira anogamuchira,+ munhu wose anotsvaka anowana, uye munhu wose anogogodza achazarurirwa. 11 Chokwadi, ndibaba vapi pakati penyu, vanoti kana mwanakomana wavo+ akakumbira hove, vangamutambidza nyoka panzvimbo pehove? 12 Kana kuti akakumbirawo zai, vangamugamuchidza chinyavada here? 13 Naizvozvo, kana imi muchiziva kupa vana+ venyu zvipo zvakanaka, kunyange zvazvo makaipa, Baba vari kudenga vachapa vaya vanovakumbira mudzimu mutsvene+ zvikuru sei!” 14 Gare gare akanga achidzinga dhimoni raiita kuti munhu ave mbeveve.+ Pashure pokunge dhimoni racho rabuda, mbeveve yakataura. Uye mapoka evanhu akashamiswa. 15 Asi vamwe vavo vakati: “Anodzinga madhimoni achishandisa Bherizebhubhu mutongi wemadhimoni.”+ 16 Zvisinei, vamwe, kuti vamuedze, vakatanga kutsvaka chiratidzo+ chinobva kudenga kubva kwaari. 17 Achiziva zvavaifunga+ akati kwavari: “Umambo hwose hwakapesana pachahwo hunoparara, uye imba yakapesana pachayo inowa.+ 18 Naizvozvo kana Satani akapesana pachake, umambo hwake huchamira sei?+ Nokuti munoti ndinodzinga madhimoni ndichishandisa Bherizebhubhu. 19 Kana ndichidzinga madhimoni ndichishandisa Bherizebhubhu, vanakomana venyu+ vanoadzinga vachishandisa ani? Nokuda kweizvi ivo vachava vatongi venyu. 20 Asi kana ndichidzinga madhimoni nomunwe waMwari,+ chokwadi umambo hwaMwari hwasvika kwamuri.+ 21 Munhu akasimba,+ ane zvombo zvakakwana, paanorinda muzinda wake, zvinhu zvake zvinoramba zviri murugare. 22 Asi kana mumwe munhu akasimba kumupfuura+ akauya, akamurwisa akamukunda,+ iye anotora zvombo zvake zvose zvaanga achivimba nazvo, ogova zvinhu zvaamupamba. 23 Asiri kurutivi rwangu anopesana neni, uye asingaunganidzi pamwe chete neni anoparadzira.+ 24 “Mudzimu usina kuchena paunobuda mumunhu, unopfuura nomunzvimbo dzakaoma uchitsvaka nzvimbo yokuzororera, uye, kana waishaya, unoti, ‘Ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda.’+ 25 Uchisvika unoiwana yakatsvairwa yakachena uye yakashongedzwa. 26 Unobva waenda, wonotora mimwe midzimu minomwe+ yakaipa kwazvo kupfuura iwo, uye, kana yapinda, inogara imomo; uye kuguma kwomunhu iyeye kunova kwakaipa kwazvo kupfuura kutanga kwake.”+ 27 Zvino paaitaura zvinhu izvi mumwe mukadzi akanga ari mukati meboka revanhu akashevedzera, akati kwaari: “Rinofara dumbu+ rakakutakurai nemazamu amakayamwa!” 28 Asi iye akati: “Aiwa, panzvimbo paizvozvo, Vanofara vaya vanonzwa shoko raMwari vachirichengeta!”+ 29 Mapoka evanhu paakanga achiungana, iye akatanga kuti: “Chizvarwa chino chizvarwa chakaipa; chinotsvaka chiratidzo.+ Asi hapana chiratidzo chachichapiwa kunze kwechiratidzo chaJona.+ 30 Nokuti Jona+ zvaakava chiratidzo kuvaNinivhi, saizvozvowo Mwanakomana womunhu achavawo akadaro kuchizvarwa chino. 31 Mambokadzi+ wokumaodzanyemba achamutswa pakutongwa pamwe chete nevanhu vechizvarwa chino uye achavapa mhosva; nokuti akabva kumigumo yenyika kuti azonzwa uchenjeri hwaSoromoni, asi, tarirai! mumwe munhu anopfuura+ Soromoni ari pano. 32 Vanhu vokuNinivhi vachamuka pakutongwa pamwe chete nechizvarwa chino uye vachachipa mhosva; nokuti vakapfidza pane zvakaparidzwa naJona;+ asi, tarirai! mumwe munhu anopfuura+ Jona ari pano. 33 Munhu akabatidza rambi, haariisi mudura repasi pemba kana kurikwidibira nedengu rokuyeresa, asi anoriisa pachigadziko cherambi,+ kuti vaya vanopinda vaone chiedza. 34 Rambi romuviri iziso rako. Kana ziso rako rakanaka, muviri wako wose wakajekawo;+ asi kana rakaipa, muviri wako une rimawo. 35 Naizvozvo svinurirai. Zvichida chiedza chiri mamuri irima.+ 36 Naizvozvo, kana muviri wako wose wakajeka pasina kana rutivi rune rima, wose uchava wakajeka+ sepaya rambi parinokuvhenekera nemwaranzi yaro.” 37 Paakanga ataura zvinhu izvi, mumwe muFarisi akamukumbira kuti adye+ naye. Naizvozvo akapinda, akatsenhama patafura. 38 Zvisinei, muFarisi wacho akashamisika paakaona kuti haana kutanga ageza+ asati adya zvokudya zvemasikati. 39 Asi Ishe akati kwaari: “Zvino imi vaFarisi, munochenesa kunze kwekapu nedhishi, asi mukati+ menyu makazara kupamba nouipi.+ 40 Mapenzi! Akaita kunze+ haasi iye akaitawo mukati here? 41 Kunyange zvakadaro, ipai varombo zvinhu zviri mukati kuti zvive zvipo muchivanzwira ngoni,+ uye tarirai! zvimwe zvinhu zvose zvakachena kwamuri. 42 Asi mune nhamo imi vaFarisi, nokuti munopa chegumi+ chemindi neruyi nechemimwe miriwo yose, asi munodarika kururamisira uye kuda Mwari! Maisungirwa kuti muite zvinhu izvi, asi kwete kurega zvimwe zvinhu zviya.+ 43 Mune nhamo imi vaFarisi, nokuti munoda zvigaro zvepamberi mumasinagogi nokukwaziswa pamisika!+ 44 Mune nhamo imi, nokuti makafanana nemakuva aya asiri pachena, zvokuti vanhu vanofamba pamusoro pawo vasingazvizivi!”+ 45 Achipindura, mumwe wevaya vaiziva+ Mutemo kwazvo akati kwaari: “Mudzidzisi, pamunotaura zvinhu izvi munotizvidzawo.” 46 Iye akabva ati: “Mune nhamo nemiwo munoziva Mutemo kwazvo, nokuti munotakudza vanhu mitoro yakaoma kutakura, asi imi hamubati mitoro yacho kana nomumwe weminwe yenyu!+ 47 “Mune nhamo imi, nokuti munovaka makuva evaprofita, asi madzitateguru enyu akavauraya!+ 48 Chokwadi muri zvapupu zvemabasa emadzitateguru enyu asi munobvumirana+ nazvo, nokuti ava vakauraya+ vaprofita asi imi muri kuvaka makuva avo. 49 Nokuda kweizvi uchenjeri+ hwaMwari hwakatiwo, ‘Ndichavatumira vaprofita nevaapostora, uye vachauraya nokutambudza vamwe vavo, 50 kuti ropa revaprofita+ vose rakateurwa kubva pakuvambwa kwenyika ribvunzwe pachizvarwa chino,+ 51 kubvira paropa raAbheri+ kusvikira kuropa raZekariya,+ akaurayirwa pakati peatari neimba.’+ Chokwadi, ndinokuudzai, richabvunzwa pachizvarwa chino. 52 “Mune nhamo imi munoziva Mutemo kwazvo, nokuti makabvisa kiyi yezivo;+ imi hamuna kupinda, uye makadzivisa vaya vaipinda!”+ 53 Zvino paakabuda ipapo vanyori nevaFarisi vakatanga kumumomotera kwazvo uye vakaramba vachimubvunza pamusoro pezvimwe zvinhu, 54 vachimuvandira,+ kuti vabate+ chimwe chinhu pakutaura kwake.
^ Ru 11:4 Kureva, “zvikwereti.”